Filim ku saabsan Soomaalida oo ka ilmaysiiyay raysal wasaaraha Sweden [Video] | Somaliska
Shalay waxaa baarlamaanka Sweden laga daawaday filimka “Trevligt Folk” ee ku saabsan dhalinyarada Soomaalida reer Borlänge ee ka qayb galay ciyaaraha aduunka ee Bandy. Filimka ayaa waxaa daawaday xildhibaano badan iyo wasiiro ka tirsan dowlada oo uu ka mid ahaa Raysal wasaare Stefan Löfven.
Raysal wasaaraha ayaa intii uu daawanayay filimka waxa uu ahaa mid aad u qoslaya mararka qaarna ilmaynaya. Isagoo filimka ka dib u sheegay warbaahinta in uu aad ula dhacay filimka isla markaana la doonayo in la sameeyo mashruucyada la mid ah. Waxa uu sheegay in uu aad u qoslay markii uu daawaday dhalinyarada oo aan waligood baraf ku socon oo dhulka ku dhacaya dhowr jeer. Waxa uu intaas ku daray in uu ka ilmeeyay markii ay taabatay dareenka filimka.
Raysal wasaaraha Sweden ayaa bishii hore markii uu Addis Ababa kula kulmay madaxweynaha Somalia u sheegay in filimkaan uu soo baxay. Ragga sameeyay filimka oo lagu magacaabo Filip iyo Fredrik ayaa sheegay in ay cajalad u diri doonaan madaxweynaha Somalia marka filimka Af-Soomaali lagu turjumo.
waa arin wngsan o posetive ah.
Taas waxay qiraysaa in raysal wasaare Löfven dareen bina aadamnimo iyo dub naxa uuleeyahay, lol lkn filmka masoo baxayo mobile ka why???!!!!!
Abas Abdirahman says:
raysal wasaare löfven waa nin aad ujecel shacabka soomaaliyeed waxaana leeyahay soomalida sweden guuleysta hankiina iyo himiladiina horey uqaada tack